musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » 2022 Maguta Akawanda Anopa muUSA
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Chikwata chebaseball handicho chega chinhu chitsvene muTwin Cities. Minneapolis neSt. Paul, Minnesota, zvinoratidzira zvamazvirokwazvo revo ye“muvakidzani.”
Sezvatinopinda mumwaka wekupa - kupa kutenda nekubatsira avo vanoshaya - vazhinji vedu tiri kushanda uye kuwana yakawanda, asi denda iri rinoramba richiomesera mamirioni evaAmerica.
Kutaura zvazviri, “vanhu vakuru vanoda kusvika mamiriyoni makumi maviri vanogara mudzimba dzisina kuwana zvokudya zvakakwana” uye “vanhu vakuru vanoroja mamiriyoni gumi nemaviri vari kusara parendi,” maererano neCenter on Budget and Policy Priorities.
Nechemumoyo, maAmerican mazhinji ari kusimuka kubatsira avo vanoshaya.
Asi ndeapi 2022 Akanyanya Rupo Maguta?
Vaongorori vakaenzanisa zana nemakumi matatu emaguta makuru eUS pane gumi nenhatu anoratidza maitiro ehuphilanthropic, kubva pakupa zvipo kusvika kumitengo yekuzvipira kusvika kuhuwandu hwemabhangi echikafu - kunyangwe huwandu hwevanhu vakashandura Little Yemahara Library mubhokisi rokugovera zvokudya kuvavakidzani vane nzara.
Ona maguta e20 achisvika pakadzika-dzika mumoyo yavo uye muhomwe pazasi.
2022 Maguta Akanyanya Rupo
Pfungwa Dzakadzika uye Mwenje.
Mapatya Akanyanya Kuzvipira: Chikwata chebaseball handicho chega chinhu chitsvene muTwin Cities. Minneapolis neSt. Paul, Minnesota, zvinoratidzira zvamazvirokwazvo revo ye“muvakidzani.” Minneapolis yakagara pachinhanho chekutanga zvese uye muchikamu cheIndividual Generosity, ukuwo St. Paul akapedza asiri kure kumashure ari pachinhanho chechinomwe.
Havasi ivo chete vagari vemaguta aya vanonyanya kupa nguva yavo (zvose Nha. 1 yehuwandu hwekuzvipira), asi vanova nechokwadi chekushumira nhengo dzenharaunda dzine nzara nezvokudya zvinopisa. Minneapolis yakaiswa nhamba yechitanhatu uye St. Paul Nhamba yechisere mumakicheni esopu. Vakaisawo nhamba 6 neNo. 8, zvichiteerana, mukugovana nzvimbo dzebhokisi dzakagadzirirwa nevavakidzani vavo vasina chikafu panguva yedenda.
Baba Rogers vangadai vakava nezuva rakanaka munzvimbo idzi.
Maguta Makuru, Zvinodiwa Zvikuru:
Maguta makuru aiwanzoita zvirinani pane chinzvimbo pane madiki uye epakati maguta.
Imhaka yekuti maguta makuru anowanzo tarisa pakuwedzera kubatanidzwa kwavo kupfuura zvipo zvavo. Muchokwadi, maguta matatu makuru eAmerica, New York, Chicago, neLos Angeles muhurongwa ihwohwo, yakatonga mametric edu eCommunity Generosity. Houston, San Francisco, neWashington, DC, vakaiswawo mugumi vepamusoro pechikamu ichi.
Nekuwedzera kusaenzana kwehupfumi, maguta makuru aya anoratidza kuti rupo rwunoita kuti hubure parunonyanya kudiwa.
Florida inowira parutivi rweWayside:
Florida yakatumira maguta mana kune edu epasi gumi, kusanganisira Hialeah munzvimbo yekupedzisira zvachose. Jacksonville (No. 10) uye Orlando (No. 45) ndiwo chete maguta maviri eSunshine State anotsemura hafu yepamusoro.
Muchikamu cheIndividual Generosity, maguta akawanda eFlorida akasungirirwa nzvimbo yekupedzisira mumametric mana kubva pamatanhatu uye akangopukunyuka nepaburi rekupedzisira mune mamwe maviri. Kuita kwavo muCommunity Generosity kwanga kusiri nani, kana. Huwandu hwenzvimbo dzekugara dzemhuka ndiyo chete metric kubva pazvinomwe zvakazara umo Florida guta harina chinzvimbo muzasi gumi kana tie yenzvimbo yekupedzisira.
Kana wakawira panguva dzakaoma, usaende kumaguta mazhinji eSunshine State uchitsvaga rubatsiro - asi iva nechokwadi chekuti shamwari dzako dzine makumbo mana dzichawana imba.